Fihetseham-bahoaka tany Mananara Avaratra : saika nidiran’ny fokonolona an -keriny ny biraon’ny zandary | NewsMada
Fihetseham-bahoaka tany Mananara Avaratra : saika nidiran’ny fokonolona an -keriny ny biraon’ny zandary
Misesy tsy an-kiato ny fitsaram-bahoaka sy fitakiana fitsaram-bahoaka. Ny biraon’ny zandary ao Mananara Avaratra indray, ny alakamisy teo, no saika nidiran’ny fokonolona an-keriny nitakiana hamoahana lehilahy iray nahafaty olona tany an-toerana.
Ny ampitson’ilay zava-nitranga tao Ambanja momba ny fikasana nataona andian’olona marobe hamaky ny fonjan’Ambanja hamoahana jiolahy hanaovana fitsaram-bahoaka, nitrangana savorovo niafara tamin’ny fikasana hanafika ny biraon’ny zandary koa tao amin’ny fokontany Agnalampotsy Mananara Avaratra. Fototry ny olana ny fitakiana tamin’ny zandary hamoahana ilay jiolahy tompon’antoka tamin’ny vonoan’olona tao amin’io fokontany io no. Araka ny fampitam-baovao voaray avy amin’ny zandary, nitrangana vaky trano tao an-toerana, ny alakamisy 16 marsa 2017 tamin’ny 8 ora maraina. Teo am-panenjehana ilay mpamaky trano ilay raim-pianakaviana niharam-boina no voavely hazo tampoka ny lohany ka tsy nahatsiaro tena izy ary nitarika ny fahafatesany izany. Voasambotry ny polisy kaominaly ilay nahavanon-doza ka naterina avy hatrany ao amin’ny borigadin’ny zandary ao Mananara Avaratra. Tokony ho tamin’ny 11 ora antoandro, nahazo antso ny kaomandin’ny borigadin’ny zandary ao Mananara Avaratra fa misy olona mivorivory mikasa haka ilay jiolahy voarohirohy ho nahafaty ilay raim-pianakaviana tao an-toerana. Tsy nanaiky izany kosa anefa ny zandary sy ny lehiben’ny distrika ary ny ben’ny Tanàna.
Tezitra ireto andian’olona marobe ireto ka nobatain’izy ireo nankeo an-tokotanin’ny biraon’ny zandary ny fatin’ilay raim-pianakaviana ary nandrasana teo.
Efa nalefan’ny zandary any amin’ny borigadin’i Maroantsetra kosa anefa ilay jiolahy nokasain’ny olona hanaovana fitsaram-bahoaka. Nisy ny fanelanelanana nataon’ny lehiben’ny faritra Analanjirofo, ny lehiben’ny distrika ary ny ben’ny Tanànan’i Mananara Avaratra. Nanaiky hitondra ny razana nody ihany ireto andian’olona nitokona manoloana ny biraon’ny zandary.
Tsy voafehy intsony ny fitsaram-bahoaka…
Ireo tompon’andraiki-panjakana ao an-toerana, araka izany no niantoka ny fikarakarana ny razana sy nitondrana azy nihazo an’i Fenoarivo Atsinanana izay misy ny fasan-drazany ny asabotsy teo. Tsikaritra tato ho ato fa tsy voafehy intsony ity fitsaram-bahoaka sy fitakiana jiolahy hanaovana fitsaram-bahoaka ity. Fihetsika feno fahasahiana mihitsy ny an’ireo andian’olona satria miala amin’ny fikasana hamaky fonja, izao indray ity kasain’ny olona hidirana an-keriny ny biraon’ny zandary hakana ilay olona tadiavin’izy ireo. Taty Mananara Avaratra ihany koa, nisy ilay kaomisarian’ny polisy notafihin’ny andian’olona marobe toy izao. Toy izao koa no nanaovan’ny andian’olona ny biraon’ny zandary tao Namorona Mananjary ka niafara tamin’ny fitsaram-bahoaka ny zandary GP2C Marcellin, ny 29 desambra 2016. Teo koa ny fanafihan’ny olona ny tobin’ny zandary tao Besalampy, ny 19 janoary 2017 teo.
Taratry ny fipoahana ara-tsosialy ny firongatry ny fitsaram-bahoaka toy izao satria mikomy amin’ny mpitondra fanjakana ny vahoaka. Tsy misy azony ianteherana intsony manoloana ny fangirifiriana iainany isan’andro, isan’izany ny tsy fandriampahalemana izay mampikaikaika ny olona ankoatra ny fidangan’ny vidim-piainana. Tsy misy vahaolana matotra anefa raisin’ny mpitondra fa vitan’ny hoe efa mandray fepetra ny fitondram-panjakana. Fepetra inona izany? Tsy vitan’ny resaka ambony latabatra ny raharaha toy izao fa mitaky andraikitra goavana avy amin’ny mpitondra. Midina ifotony mihitsy fa tsy mametrapetraka toy ny tany amin’ny “Raharaha Antsakabary”.